Talks in Toungoo on7May 2011 – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on7October 20117October 2011 Categories Sound File, Talks
3 thoughts on “Talks in Toungoo on7May 2011”
ဒါတင်ထားတာ နှစ်ရက်ကြာပြီဖြစ်သည့်တိုင် မည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မကွန်မန့်သေးတာမို့ Facebook မှာ ပေးထားတဲ့ သည်လင့်(ခ်)မှာ လာရေးသွားတဲ့ ကွန်မန့်တွေကိုပဲ ကူးယူ မှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်ပါတယ်။
Saw Yu: I phone ဖြင့် နားဆင်လို့ မရပါရှင် …..:(
Yesterday at 07:10 · Like
Htar Honey: လစာကြီးကြီးစားတဲ့ ကျွန်အကြီးစားမဖြစ်အောင် စာဖတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ဆရာ့ စကားက အရမ်းကို heart ထိပါတယ်ဆရာ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်မျက်လုံးတွေကို ဖွင့်ပေးတဲ့ ဆရာတို့ကို အရမ်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆရာတို့ ကျန်းမာသက်ရှည်သုခဝေကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်ဆရာ။
Sai Maung Maung Zaw: ဆရာပေးတဲ့ message ကို တော်တော်သဘောကျပါတယ်။ ဗဟုသုတ ဆိုတာ ရှာလို့လွယ်တယ်။ စိတ်မျက်စိကို ဖွင့်ထား။ ရသာစာပေဟာ လူဘောင်လောကမှာ ဘယ်လောက် အရေးပါတယ်ဆိုတာ။ ကျေးဇူးပဲဆရာ…
Yesterday at 09:25 · Like
Thar Gyi: ဆရာကျော့်အသံကိုတော့ လွှတ်ကြိုက်တယ်ဗျာ.. ပီတယ် သြတယ် အဖြတ်အတောက်နဲ့ အနိမ့်အမြင့်လဲမှန်တယ် ရင်ခေါင်းထဲကလာတဲ့ အသံမျိုး.. အော်ဒဂျင်နယ်လား လေ့ကျင့်ထားတာလားဆရာ
Atta Kyaw: အသံကတော့ အော်ဒဂျင်နယ်ပါ Ko Thar Gyi ရယ်။ အမေနဲ့ အဖေက သည်ရုပ်ကလေးနဲ့ သည်အသံကလေးပဲ ကျကျနန ပေးထားခဲ့တာပါ။ 😛 အဖြတ် အတောက် အနိမ့်အမြင့်ကတော့ လေ့ကျင့်ထားတာပါ။ ကျွန်တော် ငယ်ငယ်က စွယ်စုံရူးခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီ့ထဲမှာ သရုပ်ဆောင်ရူးက အတော်ကဲတယ်။ နောက် တစ်ချက်က ကျွန်တော်တို့ ခေတ်က ရေဒီယိုကိုပဲ ဖက်ပြီး ကြီးရတာလေ။ (ကျွန်တော်တို့ အသက် ၂၃-၄ နှစ်မှ ရုပ်သံဆိုတာက မြန်မာပြည်ကို ရောက်လာတာ။) ရေဒီယို နားထောင်တာများပြီး ဟိုခေတ်က ရေဒီယိုက ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ ပြောပုံဆိုလက် လေယူလေသိမ်းတွေကလည်း ငြိစရာ သိပ်ကောင်းတော့ စွဲနေပြီး ကိုယ်တိုင် ပြောတဲ့အခါလည်း အဲဒါတွေ ချသုံးဖြစ်သွာတာပါပဲ။
Wai Wai Lynn Kyi: သရုပ်ဆောင်ဝင်းဦးလိုပေါ့နော်..ဆရာ.. 🙂
Myo Tha Htet: Thank you. Cheers!
8 October 2011 at 12:32 pm
ဆရာ…မင်္ဂလာပါရှင့်။ သမီးက ဆရာ့စာတွေအမြဲဖတ်ပါတယ်။ ကောမန့်တွေတော့ တခါမှ မရေးမိပါဘူး။
တမျိုးမထင်ပါနဲ့ရှင်။ကောမန့်တွေက ဆရာအတွက်အားဖြစ်စေမယ်ဆိုရင် သမီးလိုမျိုး ဆရာ့စာတွေမလွတ်တမ်းဖတ်နေပေမယ့် ကောမန့်မရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုယ်စား တောင်းပန်ပါတယ်။
ဆရာ့ကို စာဖတ်ပရိတ်သတ်က အမြဲအားပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ဆရာကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ။
Previous Previous post: Money makes the world go round, but…
Next Next post: Inside-the-box Thinking